Vakomana. Kugadziriswa kwakabudirira kwenyaya naGarth Ennis naDarick Robertson | Zvazvino Zvinyorwa
Vakomana. Iyo yakabudirira comic adapta yaGarth Ennis naDarick Robertson
Vakomana akateedzana e comic yakanyorwa na Garth ennis uye kudhonzwa na Darick robertson. Pano inoburitswa nereferenzi chisimbiso chemhando iyo iri Edhisheni Standard. Uye akaiisa munhepfenyuro spotlight yake kusaremekedza, hutsinye, kuputsa pasi uye kugadzirisa satirical kuterevhizheni. A kubudirira kubudirira sezvo yakaburitswa muzhizha iyo ichaenderera mumwaka wechipiri ichangopedza kupfura. Magamba makuru haazombove zvaanga ari. Ini handina kukwanisa kunakirwa zvakanyanya.
1 Vakomana - Iyo inosetsa
2 Vakomana - Iyo nhepfenyuro yeterevhizheni
Vakomana - Iyo inosetsa
Tiri munyika umo a boka remagamba, ese manomwe, vanoshandira Vought mubatanidzwa, vakaora uye vakashata. Saka mumwe munhu anoda kuvachengetedza. Idzo inhengo dze Vakomana, varume vakaoma uye vane chisimba zvakadaro uye vasina hunhu, vamwe vacho vakabvumawo kuwana masimba makuru ekugona isa magamba iwayo panzvimbo yawo kuti ivo vanyengeri.
Kutarisa pamapeji eVakomana iwe unogona kuona iyo kutambisa chisimba, kutsoropodza, ropa nekushatisa iyo inodzikisira kugadzirwa kwaEnnis naRobertson mumagwaro avo nemadhirowa. Chirongwa yeaya anoshoreka, akaora uye akavhiringidzwa magamba uye avo vakaenzana vakavhiringidzika uye vane chisimba nemesis zviri, zvirinani, zvekutanga. Yese imwe kumonyoroka kune zvakasikwa zvegamba guru mumuviri uye mutsika kukwana izvo zvedi pano ndizvo zvakanyanya villains.
Kutsoropodzwa ndekwevose zvavo. Kana kuti, budiriro ndeyekuvaratidza mune yavo yemunhu mamiriro, izere noutera, zvikanganiso uye zvikanganiso zvinowedzerwazve nehunhu hwavo hwegamba. Iko kufungidzira kwekushandira zvakanaka uye zvinokonzeresa zvakakandwa zvachose kunze nenyika yakaipisisa. Kungofanana neyakaipisisa yemamiriro ezvinhu emunhu inofananidzwa muvadzivisi vake isina iwo masimba makuru, kana nemamwe acho.
Rozari yemavara haikanganwiki pamativi ese ari maviri, akadhirowewa nemitsetse gobvu uye nekukurumidza uye kusaongorora hurukuro. Billy Butcher ndiye anonyatsoratidza muvengi wake mukuru, psycho Patriot, mutungamiri wevanomwe, vanoshandira samasimba Vought mubatanidzwa, uye pamusoro pezvose nekuda kwavo. Asi ivo vese uye vese nyaya dzavo dzega dzinopindirana neyakafanana nuances asina hunhu uye mumwe nemumwe ane hutsinye. Iwe unongo fanirwa kuverenga iwo mazita: Mazamu Mukaka, Mukadzi, ChiFrench, Akasviba Nhema, Akadzika...
Kuti uvazive zvakanaka, pane iyo yakazara editions izvo zvakabudiswa.
Vakomana - Iyo nhepfenyuro yeterevhizheni
Yakagadzirwa na Erik Kripke, izvo zvaakaitawo Zvemweya, the Zvikamu gumi izvo zvinoumba kuchinjika kwake kuterevhizheni nhevedzano tora hunhu hwe comic nekubudirira kukuru. Kutaridzika, Pasina kusiya gramu yemhirizhonga uye kuomarara kwemakatuni uye nezvimwe zvine mutsindo zvinopfuura zvinoshamisa. Y zvakarongeka ine script iyo yakasainwa zvakare nemunyori wayo Garth Ennis, pakati pevamwe.
Eheka pane misiyano nekomiki, zvese mukugadzirwa uye kurapwa kwevatambi uye munguva dzakasiyana nenzvimbo dzaive dzakanyatsokodzera kurondedzerwa kweterevhizheni. Asi ini handisi kuzogera iwo madhishu acho kuitira kana vashandi vasina kuzviona. Vamwe vavo kukanganisa mavara akafananasemuenzaniso, kune mumwe wevanyori, Hugh musasa, ane pepa mutsetse wakasiyana zvachose nemhando yemuviri iyo Jack Quaid inomupa munhevhizheni.
Asi kubudirira mune yakasarudzwa cast haina kupokana uye imwe yeakakura midziyo yekubudirira kweVakomana. Aya ndiwo maratidziro avanonyanya kuita Patriot iyo inonyatso kunyora iyo New Zealander Antony nyeredzi. Uye anopa mhinduro yakanakisa iyo Billy Butcher yemumwe munhu, a Karl Urban izvo, pakupedzisira, zvirokwazvo anowana iro basa rehupenyu hwake iro raakange achikodzera mushure mezvakawanda zvindori uye nzendo pane iyo Bhizinesi.
Zvisinei, munhu wese anounza akanakisa ezvakaipisisa kubva pakubata ikoko yemagamba makuru uye vanhu imwe neimwe inoshoreka. Saka usarasikirwa nazvo. Varaidzo inovimbiswa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Comics » Vakomana. Iyo yakabudirira comic adapta yaGarth Ennis naDarick Robertson